CAFFEE - (Ebla 16,2013): Waltajjiin marii walitti dhufeenya Naannolee ollaa Bahaafi Kibba Itoophiyaatti argaman cimsuuf qophaa'e Finfinneetti gaggeeffamaa jira. - Wednesday, 28 April 2021
CAFFEE - (Ebla 15,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa sektaroota magaalaa 10 gamaaggame. - Wednesday, 28 April 2021
CAFFEE - (Ebla 15, 2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa qaamolee haqaafi nageenyaa sekataroota 10 gamaaggame. - Wednesday, 28 April 2021
CAFFEE – (Ebla 14,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii sadii gamaaggame. - Wednesday, 28 April 2021
CAFFEE - (Ebla 14,2013): Ittigaafatamummaa dachaa qabnu beeknee hirmaannaa nurraa eegamu taasisuun biyya keenya gara demokiraasii dhugaatti ceessisuu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo. - Wednesday, 28 April 2021
CAFFEE – (Ebla 13,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Baajataafi To'annoo Baasii Mootummaa Caffee Oromiyaa raawwii karoora kurmaana 3ffaa manneen hojii shanii gamaaggame. - Wednesday, 28 April 2021
CAFFEE – (Ebla 13,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bu’uuraalee Misoomaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii jahaa gamaaggame. - Wednesday, 28 April 2021
CAFFEE – (Ebla 13,2013):Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Baadiyaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii sagalii gamaaggamee jira. - Wednesday, 28 April 2021
CAFFEE - (Ebla 12,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Dubartoota, Daa'immaniifi Dargaggootaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii lamaa gamaaggamee jira. - Wednesday, 28 April 2021
CAFFEE - (Ebla 12,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Hawaasummaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii saddeetii gamaaggamee jira. - Wednesday, 28 April 2021
Caffeen hojii hordoffiifi to’annoo karaa Koreewwan Dhaabbii isaa kan hojjetu yommuu ta’u, tooftaaleen hordoffiifi to’annoon ittiin gaggeeffamus, karooraafi baajata jalqaba waggaa irratti raggaase ilaalchisee hojiirra oolmaa isaa gabaasawwan qaamolee mootummaafi manneen hojii Caffeef itti waamaman irraa dhiyaatan yeroo seeraan ta’eef keessatti qorachuun gamaaggama gaggeessa.
Koreewwan Dhaabbii Caffee saddettan jiranis bu’uura seeraan taa’e kana irratti hundaa’uun manneen hojii seeraan qoodamanii kennamaniif (isaaniif itti waamaman) karooraafi raawwii hojii isaanii kurmaana kurmaanaan gamaaggamuun duubdeebii kennu.
Kana malees, waggaatti yeroo lama raawwii hojii misoomaa gadi bu’uun kan daawwataniifi qaamolee hawaasaa waliin marii kan taasisan yommuu ta’u, tibbanas koreewwan jiran garee saddetiin Godinaalee 8tti gadi bu’uun daawwannaa hojiiwwan misoomaa gaggeessuun isaanii ni yaadatama.
Har’arraa eegalees, manneen hojii dhimmi ilaaluu waliin raawwii hojii gama misooma magaalaan, hojiiwwan misooma baadiyyaan, kenniinsa tajaajila haqaafi bulchiinsaaf seeraan, hawaasummaan, bu’uuraalee misoomaan, to’annoo baasii mootummaan, bulchiinsa gaariifi kenniinsa tajaajila ummataan jiru, akkasumas, fayyadamummaa dubartootaafi dargaggootaa mirkaneessuun walqabatee raawwii walakkaa waggaa bara kanaa qorachuu irratti argamu.
Toorbee kana 1120
Ji'a kana 14540
2008 irraa eggalee 4630028
CAFFEE - (Ebla 16,2…
__//__ Qopheessummaa Mana Maree Federeeshiniitiin Mootummoota Naannolee kanneenii kan hirmaachise waltajjichi "Ollummaa Gaariin Badhaadhina Itoophiyaaf" mata duree jedhuun taa'amaa jira. Mootummoonni Naannolee ollaa walii jiraatan dhimmoota waloo irratti waldeeggaruufi qindoominaan akka hojjetaniif...
CAFFEE - (Ebla 15,20…
__//__ Korichi Gabaasa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii, Biiroo Bulchiinsaafi Itti Fayyadama Lafaa, Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii, Biiroo Daldalaa, Komiishinii Invastimantii, WALQO, Waldaa Aksiyoona Daldala Faayinaansii Meeshaalee Kaappitaalaa, Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf...
CAFFEE - (Ebla 15, 2…
__//__ Korichi Gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigalaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Manneen Sirreessaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee...
CAFFEE – (Ebla 14,20…
__//__ Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiifi Misooma Qabeenya Namaa, A/T/ Saayinsii, Teeknolojii Qunnamtiifi Odeeffannoofi Yuunivarsitii Naannoo Oromiyaa qorateera. Raawwii hojii Biiroo Paablik Sarvisiin walqabatee, kenniinsa tajaajilaa fooyyessuuf leenjiiwwan jijjiirama...
CAFFEE - (Ebla 14,20…
__//__ Konfiraansiin Liigii Dubartoota Partii Badhaadhinaa Oromiyaa Magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Keessummaa Kabajaa Konfiransichaa kan ta'an Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo haasawaa hirmaattota konfiransichaaf taasisaniin filannoon dhufu bilisa, hunda hirmaachisaafi...
CAFFEE – (Ebla 13,20…
__//__ Koreen kun, gabaasa raawwii Abbaa Taayitaa Galiiwwanii, Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee, Komiishinii Karooraafi Misooma Diinagdee, Ejensii Bittaaf Dhabamsiisa Qabeenyaafi Mana Hojii Odiitara Muummicha Oromiyaa gamaaggamee jira. Korichi, raawwii Biiroo MWD qorateen...
CAFFEE - (Ebla 16,2013): Waltajjiin marii walitti dhufeenya Naannolee ollaa Bahaafi Kibba Itoophiyaatti argaman cimsuuf qophaa'e Finfinneetti gaggeeffamaa jira.
CAFFEE - (Ebla 15,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Magaalaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa sektaroota magaalaa 10 gamaaggame.
CAFFEE - (Ebla 15, 2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa qaamolee haqaafi nageenyaa sekataroota 10 gamaaggame.
CAFFEE – (Ebla 14,2013): Koreen Dhaabbii Dhimma Misooma Qabeenya Namaa Caffee Oromiyaa raawwii hojii kurmaana 3ffaa manneen hojii sadii gamaaggame.
CAFFEE - (Ebla 14,2013): Ittigaafatamummaa dachaa qabnu beeknee hirmaannaa nurraa eegamu taasisuun biyya keenya gara demokiraasii dhugaatti ceessisuu qabna jedhan Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo.